खेती अन्तरिक्ष लडाइँको – Rajdhani Daily
खेती अन्तरिक्ष लडाइँको
अमेरिका, रसिया र चीनलाई पछिपछि लखेटिरहेको भारतले अन्तरिक्षमा सेटेलाइट युद्ध लड्न सक्ने आफ्नो हैसियत बनाएको छ । मार्च अन्तिम सातामा सफलतापूर्वक प्रयोग गरिएको सेटेलाइट मार हान्ने रकेट प्रक्षेपणपछि भारतले आफूलाई संसारको चौथो अन्तरिक्ष महाशक्ति घोषणा पनि गरेको छ । यसले अबको विश्वयुद्ध वा महायुद्ध अन्तरिक्ष युद्धसँग पनि अभिन्न भएर आएको कुरालाई थप पुष्टि गर्न बल पु¥याएको छ ।
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि चीन र रुसलाई अन्तरिक्ष युद्धका लागि धम्की दिएको केही वर्षपछि नै एसियाली देश भारत अन्तरिक्ष युद्धमा सामेल हुन पुगेको छ । यो आश्चर्यको विषय भने होइन किनकि भारतले पहिले नै अन्तरिक्षमा आफ्नो उपस्थिति जनाइसकेको छ । भारतको यो उपस्थिति अन्तरिक्षमा लडाइँ गर्ने हैसियत भएकाहरूमध्ये थप एक प्रतिस्पर्धीको उपस्थिति मात्र हो ।
देश विकासको ठूलो हिस्सा कटौती गरेर, जनताको मुख मारेर, विदेशी ऋणकर्जा गरेर गरिरहेका अन्तरिक्ष प्रतिस्पर्धा मानव जातिका लागि आवश्यकता हुन् वा सोखका कुरा मात्र ? आज हामीसँग रहेका बेतारका साधनहरू, तरंगवाहक औजार र प्रविधिहरू अन्तरिक्षमा मानव र मानव निर्मित साधनहरूको पहुँचले नै सम्भव हुन गएका हुन् । तर अब यी रचनात्मक र उपयोगी मात्र हुन नगएर ध्वंसात्मक र विभेद तथा उत्पीडनको सहयोगी पनि सिद्ध हुन गइरहेका छन् ।
विज्ञान तथा प्रविधिको विकाससँगै सुरुको पहुँच हुँदा बखतकै अन्तरिक्ष कब्जाको लडाइँ निकै रोचक र महँगो साबित हुन थालिसकेको छ । अन्तरिक्ष के हो र कति टाढा छ भन्नेभन्दा पनि अन्तरिक्ष कसको हो र किन कब्जाको होड चलिरहेको छ भन्ने कुराले प्राथमिकता पाइसकेको छ । अब अन्तरिक्षमा को पुग्यो होइन, को पुगेर के गरिरहेको छ भन्ने कुरा सर्वसाधरण जनताको पनि चासोको विषय बन्न थालेको छ ।
देश विकासको ठूलो हिस्सा कटौती गरेर, जनताको मुख मारेर, विदेशी ऋणकर्जा गरेर गरिरहेका अन्तरिक्ष प्रतिस्पर्धा मानव जातिका लागि आवश्यकता हुन् वा सोखका कुरा मात्र? आज हामीस“ग रहेका बेतारका साधनहरू, तरंगवाहक औजार र प्रविधिहरू अन्तरिक्षमा मानव र मानव निर्मित साधनहरूको पहु“चले नै सम्भव हुन गएका हुन्
सर्वसाधरणका हातले बेतारको तार रेडियो चलाउनु, बेतारका तरंग मोबाइलहरूको प्रयोग गर्नु, आँखाले टेलिभिजन हेर्नु, आकाशमा फाइटर उडेको देख्नु र विकसित प्रविधिहरूको सामान्यीकरण हुनु विज्ञान तथा प्रविधिमैत्री जनचेतनाको विकास हुनु हो । हालसम्म जहाँ भए पनि र जोसुकै जात, थर वा राष्ट्रियता भएका वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका भए पनि ती सिंगो मानव जातिका सम्पत्ति भएकाले जहाँ रहे पनि त्यहाँको सापेक्षतामा मानव जातिबीच पुग्नु स्वाभाविक पनि हो । भलै यो आजका मितिमा सबै मानवका सम्पत्तिका हिसाबले पुगिरहेको नभई व्यापारका हिसाबले पुगिरहेको छ ।
यसमा पहुँच हुने देश र देशका शासकहरूले संसारका सम्पूर्ण मानव जातिमाथि आफ्नो श्रेष्ठता र वर्चस्व कायम गर्ने अस्त्रका रूपमा यसलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । यसका साथै विश्वमा व्यापारको एकाधिकार कायम गरेकाहरूले यसलाई आफ्नो बिकाउ मालका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । यसैले यो ज्ञान अहिले वर्ग स्वार्थका लागि र हुनेखानेहरूका लागि उपयोगमा आएको छ । संसारको मूल राजनीतिक प्रवृत्ति पँुजीवाद र त्यसमा साम्राज्यवाद तथा उपभोक्तावाद नै हो । उपभोग मूल प्रवृत्ति हो ।
यो अवस्थामा विश्वका शक्तिशाली देश र त्यहाँका शासकवर्ग विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग वा उपयोग आफ्नो हित र पक्षमा गर्न मरेर लागि परिरहेको छन् । यसैका कारण साम्राज्यवादी भनिने वा पुँजीवादी पक्षधरहबीच पनि संसार उपयोगबारे लुछाचुँडी छ । अन्तरिक्ष उपयोगबारे तछाडमछाड छ । यसैले, पृथ्वीमा मात्र युद्ध नजन्माएर अन्तरिक्षमासमेत युद्धको अवस्था सिर्जना हुन गएको छ ।
अन्तरिक्षमा प्रवेश र शक्तिका हिसाबले संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रसिया, युरोप, भारत र जापानलाई महाशक्तिका रूपमा लिइन्छ । पछिल्लो चरणमा अमेरिकाको अन्तरिक्ष वर्चस्व र एकाधिकार अब कायम रहन गएको छैन । यो अब प्रतिस्पर्धामा गएको छ । अमरिकालाई चनौती दिने थुप्रै भइसकेका छन् । तर, अमेरिका, रसिया, चीन र भारत पछिल्लो चरणमा नजिकका प्रतिस्पर्धी भएका छन् । रमाइलो कुरा त के पनि भएको छ भने अन्तरिक्ष युद्धलाई आकाशीय युद्ध मोर्चाका रूपमा परिभाषित गरिन थालिएको छ ।
Tags: खेती अन्तरिक्ष लडाइँको